अध्याय ५४ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
म हरेक मण्डलीको अवस्थाको बारेमा पूर्ण रूपले परिचित छु। म त्यसको बारेमा बुझ्दिनँ वा स्पष्ट छैन भनी नसोच्। मण्डलीका विभिन्न मानिसहरूको बारेमा चाहिँ, मसित अझ स्पष्ट बुझाइ र ज्ञान छ। तँलाई तालीम दिनु नै अहिले मेरो अत्यावश्यक इच्छा हो, ताकि तँ धेरै छिटो प्रौढतामा बढ्न सक; ताकि मेरो निम्ति तँ प्रयोग हुन सकिने दिन चाँडै आएको होस्; ताकि तिमीहरूका कार्यहरू मेरो बुद्धिले भरिएको होस्, ताकि तिमीहरू जहाँसुकै भए पनि तिमीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रकट गर्न सक। यसरी मेरो आखिरी उद्देश्य हासिल गरिनेछ। मेरा छोराहरू! तिमीहरूले मेरो इच्छाको निम्ति वास्ता देखाउनुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई सिकाउँदा मलाई तिमीहरूको हात पक्रनुपर्ने नबनाऊ। तिमीहरूले मेरो इच्छालाई राम्रोसित बुझ्न र मामलाहरूको केन्द्रबिन्दुलाई हेर्न सिक्नुपर्छ। यसले तिमीहरूलाई तिमीहरूले सामना गर्ने हरेक मामलालाई सहजताका साथ एक चुट्कीको भरमा सम्हाल्न सक्षम बनाउनेछ। तिमीहरूको तालीममा, तिमीहरूले यसलाई पहिलोपल्ट बुझ्न नसकौला—तर दोस्रो चोटि र तेस्रो चोटिपछि अनि त्यस्तै अवस्थापछि, तिमीहरूले अन्ततः मेरो इच्छालाई बुझ्न सक्नेछौ।
तिमीहरूका वचनहरूको सधैँ अभेद्य गुण हुन्छ। तिमीहरू यसलाई बुद्धि हो भनी भन्छौ, होइन र? कहिलेकाहीँ, तिमीहरूका वचनहरू अवज्ञाकारी हुन्छन्; कहिलेकाहीँ, तिमीहरू ठट्टाको मुद्रामा बोल्छौ; अनि कहिलेकाहीँ, तिमीहरू मानव धारणाहरू र डाहाको तत्वसहित बोल्छौ…। समग्रमा, तिमीहरू दृढताविना बोल्छौ, यस क्रममा अरूलाई जीवन पूर्ति कसरी गर्ने वा तिनीहरूको अवस्थाहरू कसरी बुझ्ने भनी जान्दैनौ, तर लापरवाही पूर्वक बातचित गर्छौ। तिमीहरूको सोच अस्पष्ट छ र तिमीहरूलाई बुद्धि के हो र छल के हो भन्‍ने बारेमा कुनै ज्ञान छैन। तिमीहरू कति भ्रमित छौ! तिमीहरूले छल र कुटिलतालाई बुद्धि भनी ठान्छौ; के यसले मेरो नामलाई बदनाम गर्दैन र? के यो मेरो विरुद्धमा गरिने ईश्‍वरनिन्दा होइन र? के यसले मेरो विरुद्धमा झूटा अभियोग ल्याउँदैन र? त्यसैले, तिमीहरूले खोजी गर्ने लक्ष्य के हो? के त्यसको बारेमा तिमीहरूले होशियारपूर्वक सोचेका छौ? के तिमीहरूले यसको बारेमा कुनै खोजी गरेका छौ? म तँलाई बताउँछु, तिमीहरूले खोजी गर्ने मार्गदर्शन र उद्देश्य नै मेरो इच्छा हो। यदि यस्तो नभएको भए, सबै कुरा व्यर्थ हुनेथियो। मेरो इच्छालाई नजान्‍नेहरू त्यस्ता हुन् जसले कसरी खोजी गर्ने भनी जान्दैनन्, जसलाई परित्याग गरिनेछ, उखालिनेछ! स्पष्ट रूपले, मेरो इच्छालाई बुझ्नु नै तिमीहरूले सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ हो। यो कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा अत्यावश्यक कार्य हो, र यसमा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन! मैले तिमीहरूलाई एक-एक गरेर काममा बोलाइञ्‍जेल तिमीहरू मेरो निम्ति नपर्ख! तिमीहरू सारा दिन मन्द-बुद्धिपूर्ण अचेत अवस्थामा बिताउँछौ। कति मूर्खतापूर्ण! तिमीहरूको अन्योलता अचम्मको छ; आफैलाई सोध: काम गर्दा तिमीहरूले कति पटक मेरो इच्छालाई बुझेका छौ? अहिले तिमीहरूले आफैलाई तालीम दिने समय हो! एउटा सम्‍भावना भनेको तिमीहरूलाई मैले एक-एक गरेर निराकरण गर्नु हो! काम गर्दा तिमीहरूले अनुभव प्राप्त गर्न र अन्तर्दृष्टि तथा बुद्धि हासिल गर्न सिक्नुपर्छ। तिमीहरूका मुखबाट निस्केका वचनहरू असल र राम्रा छन्, तर तिमीहरूको वास्तविकता के हो? जब तिमीहरूले वास्तविकताको सामना गर्छौ, तब तिमीहरूले यसको बारेमा केही गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले जे भन्छौ त्यो वास्तविकतासित कहिल्यै मेल खाँदैन। साँच्चै, म तिमीहरूले जे गर्दैछौ त्यो हेर्न सक्दिन; जब म हेर्छु, म भयानक रूपमा दुःखी हुन्छु। यसलाई याद गर! भविष्यमा, मेरो इच्छालाई राम्ररी बुझ्‍न सिक!
अघिल्लो: अध्याय ५३
अर्को: अध्याय ५५